Updated: 2016-06-06 16:18
JR ယူဖုအင်းဘူတာ က နေ ယူဖု မိဒိုး ရိ ထိ ၅ မိနစ်လောက် လမ်း လျောက် လိုက် ရင် ချစ် စရာကောင်းတဲ့ ပေါ့ပုကွန်း ကဖေး ဆို တဲ့ ဆိုင်လေး ကို တွေ့ ရပါလိမ့် မယ်။ ဆိုင် အတွင်း ပိုင်း ကို ၀င် လိုက် မယ် ဆို ရင် အနံ့ေ...
Updated: 2016-06-06 15:29
မစွတ်ရ ခစ်စ အိရှင်း နော့ အန်း
ဒဇိုင်းဖု တဲန်းမဲန်း နတ်ဘုရားကျောင်း ရဲ့ လျှောက် လမ်း မှာ ၇ှိ တဲ့ လက် ဆောင် တွေ နဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ဖြစ် ပါတယ်။ ဆိုင် နာမည်ကတော့ ( မာစွတ်ရ ) ဖြစ် ပြီး တော့ ၊ စာစွတ်မာ တည်းခိုဆောင် လည်း ရှိ...
Updated: 2016-05-19 10:00
ကင် ထား တဲ့ အဂျိ ငါး နဲ့ အီဝရှိ အစရှိ တဲ့ ပင် လယ် ငါး တို့ကို နယ် ပြီး ရာခိမိဆို ကို လောင်း ထား တဲ့ အနှစ် မှာ တို ဖူး ၊ သခွား သီး ၊ အာအို ဂျိဆို ကို ထည့် ပြီး ပူပူလောင် လောင်ထမင်း မှာ ထည့်...
Updated: 2016-05-10 16:01
ဟိတိုမိုဂျိ ဂုရုရု ဟင်းလျာ
ဟီတိုမိုဂျိ ဆို တာ ကတော့ ကြက်သွန်မြိတ် ကို ပြော တာ ပါ။ ခု မါမိုတို မှာ က တော့ အရင့်အရင် ကတည်း က ဟီတိုမိုဂျိ ဆို ပြီး ခေါ် ဆို ပါ တယ်။ အရသာ ကတော့ အထူးကောင်း မွန် ပြီး ပါးစပ် ထည်း မှာ ပျော် ၀င်...
Updated: 2016-04-25 17:26
ပါးပါးလေးေ တွ လှီး ထား ပြီး တော့ ကန်စွန်း ဥ နဲ့ အချို ဓါတ် ပါ တဲ့ အန်း ကော ( အစာ ) ကို ဂျုံ နဲ့ လုပ် ထား တဲ့ ဆား အရ သာလေး လဲပါ တနဲ့မီး ဖို မှာ ပေါင်း လိုက် ရင် ကျက် ပါ ပြီး ။ ( လွယ်လွယ...
Updated: 2016-04-25 17:17
အာမခုစ ကိုင်း စန်း ဒွန်း ( ပင် လယ် စာ ဇလုံ ကြီး )
အာစခုစမှာ ရ ရှိ တဲ့ လက် ဆက် တဲ့ ပင် လယ် စာ တို့ ကို သုံး ဆောင် နိုင်တဲ့ ခိုင်း စန်း ဒွန်း ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။